अक्षयकुमार हिरोइनसँग हारेपछि मुख फोरेरै फर्काए यस्तो जवाफ - Everest Dainik - News from Nepal
अक्षयकुमार हिरोइनसँग हारेपछि मुख फोरेरै फर्काए यस्तो जवाफ
मुम्बइ, चैत ५ । अभिनेत्री पूजा हेगडेले बलिउडका सुपरस्टार खेलाडी अक्षयकुमारलाई एक खेलमा दुई पटकसम्म हराइदिएको बताएकी छिन् ।
अक्षयलाई खेलमा नराम्ररी हराएपछि खुशी व्यक्त गर्दै पूजाले उक्त जानकारी आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै रितेश देशमुखलाई ट्याग गरेकी छिन् । अभिनेत्री पूजाले यसरी खुलेआम अक्षयको हारबारे उल्लेख गर्दा अक्षय रिसाएको बताइन्छ । उनले आफ्नो तरिकाले पूजालाई कडा जवाफ दिएका छन् ।
अक्षयकुमार चलचित्र सुटिङको क्रममा को-स्टार्ससँग रमाउने गर्दछन् । उनी रमाइलोको लागि विभिन्न खेल खेल्ने र ‘प्र्यांक’ समेत गर्ने गर्दछन् । यसो गर्दा उनी सम्मिलित सुटिङस्थलको वातावरण निकै रमाइलो हुने गर्दछ । यसै क्रममा हालैमात्र सम्पन्न भएको ‘हाउसफुल ४’को सुटिङको क्रममा उनलाई भिनेत्री पुजा हेगडेले एक पटकमात्र होइन, दुई–दुई पटक लुडो खेलमा हराइदिएकी थिइन् । पूजाले अक्षयको हारबारे जानकारी सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेपछि उनका प्रशंसकहरूले निकै रमाइलो मानेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस गायक हिमेश श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै
रितेश देशमुखले पूजासँग के भने?
पूजा हेगडेले आफ्नो ट्विटमा लेखिन्, ‘त्यो दिन धेरै नै सुन्दर थियो, जहाँ मैले अक्षय कुमार सरलाई एक पटक होइन, दुई-दुई पटक लुडोमा हराइदिएकी थिएँ यो मेरो सबैभन्दा महान् उपलब्धिमध्ये एक !’ यो लेखेर पूजा हेगडेले आफ्नो पोष्टमा अक्षय कुमार र रितेश देशमुखलाई ट्याग गरेकी थिइन् । यसको जवाफ दिँदै रितेश देशमुखले लेखे– ‘डियर मिस उनले एक सामान्य खेल गुमाइदिएका छन् । हाउसफुल ४ प्रमोशनको क्रममा बेटमनी हुनेछ, यसलाई जित्ने कोशिश गरौं ।’
याे पनि पढ्नुस अनुष्कादेखि ऐश्वर्यासम्म, के तपाईंलाई अभिनेत्रीका मंगलसुत्रका मूल्य कति ?
अक्षयकुमारले पूजालाई दिए यस्तो जवाफ
पूजाको यो ट्वीटपछि अक्षय कुमारले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गरे । अक्षयले लेखे– ‘यस रेकर्डलाई कायम राख्दै, हाउसफुल ४ को प्रमोशन चाँडै नै सुरु हुन गइरहेको छ ।’ यसै तरिकाले अक्षय कुमारले पूजा हेगडेलाई च्यालेन्ज गरे । हाउसफुल ४ हाउसफुल फ्रेचाइजी को चौथो चलचित्र हो । यस चलचित्रमा रितेश देशमुख, बबी देओल, कृति सैनन, कृति खरबंदा, राणा दग्गुबाती र पूजा हेगडे जस्ता कलाकारहरुले मुख्य भूमिकामा देखिँदै छन् । चलचित्रलाई फरहाद सामजीले निर्देशन गरेका हुन् र यसको निर्माण साजिद नाडियाडवालाले गरेका छन् । एजेन्सीबाट